Maamulka Premier League Oo Ku Dhawaaqay Liiska Toddoba Murashax Oo Ku Tartami Doona Xiddigii Bishii December Ee Horyaalka | Gaaroodi News
Maamulka Premier League Oo Ku Dhawaaqay Liiska Toddoba Murashax Oo Ku Tartami Doona Xiddigii Bishii December Ee Horyaalka
Maamulka horyaalka Premier League ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay liis ka kooban toddoba xiddig oo ku tartami doona xiddigii ugu fiicnaa horyaalka ee bishii tagtay ee December.
Liiskan ayaa ah mid ay iska dhex waayeen xiddigo badan oo qaab wacan usoo ciyaaray bishaas waxaana ka mid ah Paul Pogba oo afar gool iyo laba caawinood kusoo sameeyay gudaha bishaas.
Xiddigaha kusoo baxay liiskan ayaa ah kuwo bandhigyo cajiib ah kasoo sameeyay horyaalka bishaas, Filipe Anderson, Eden Hazard, Marcus Rashford, Harry Kane, Son Hueng Min, Mohamed Salah iyo Virgil Van Dijk ayaa ah toddoba murashax ee bishii December.
Anderson ayaa xiddigaha tartamaya loo magacaabay bishii labaad oo xidhiidh ah, Xiddiga ree Brazil ayaa ahaa wadnaha West Ham United oo qaadatay bisheedii ugu fiicnayd abid horyaalka, Filipe ayaa afar gool soo dhaliyay isaga oo 13 fursadood oo waaweyn abuuray.
Xiddiga ree Belgium ayaa kusoo lug lahaa 8 kamid ah 10-ka gool ee ay bishaas kasoo dhalisay Chelsea isaga oo saddex gool soo dhaliyay isla markaana shan kale caawiyay.
Kane ayaa dilaa ku ahaa xerada ganaaxa dhexdeeda isaga oo soo dhaliyay lix gool kaddib kaliya 9 bar-tilmaameed oo uu sameeyay isaga oo dhinaca kale laba gool caawiye kasoo ahaa.
Son ayaa door weyn kulahaa guulihii Tottenham oo bishaas soo heshay 15 dhibcood waxaana uu soo dhaliyay lix gool halka uu saddex kale caawiyay.
Rashford ayaa ahaa mid bandhig joogto ah lahaa isaga oo ka kala ciyaarayay boosas kala duwan oo safka weerarka ah, Da’yarkan ayaa saddex gool soo dhaliyay isla markaana shan kale soo caawiyay.
Xiddigii ugu badnaa ee kusoo lug lahaa goolal bishii December, Mohamed ayaa isku darka toban gool oo caawin iyo dhalin ah soo sameeyay isaga oo Liverpool ka caawiyay toddoba guulood bishaas gudaheeda.
Van Dijk waa sumada daafaca birta ah ee Liverpool oo kaliya saddex gool laga soo dhaliyay bishaas, Daafacan ayaa sameeyay goolkii ay Everton ku dhaafeen isagoo sidoo kale gaadhay shabaqa Wolves